Daawo Sawirrada: Madaxweynaha Turkiga oo furay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya – Somnews
Daawo Sawirrada: Madaxweynaha Turkiga oo furay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya
By somnews	 Last updated Feb 23, 2016
Shirka Madasha 6-aad ee Heerka Sare ee Soomaaliya iyo waddamada, hay’adaha iskaashiga la leh ee dhinaca dib u dhiska Soomaaliya (High Level Partnership Forum), ayaa ka furmay magaalada Istanbul.
Shirka oo ay martigelinayso dowladda Turkiga, ayaa waxaa si rasmi ah u furay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, waxaana si wadajir ah u shir guddoomin doona Madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigisa Turkiga.
Shirka Waxaa ka qeybgalay in ka badan 200 oo ergo oo ka socda in ka badan 50 dal, hay’adaha caalamiga iyo hay’adaha Qaramada Midoobay.
Shirka oo socon doona muddo laba maalmood ah, ayaa waxaa qiimeyn iyo dib u eegis lagu sameyn doonaa horumarka laga sameeyay Barnaamijka Cahdiga Cusub ee Soomaaliya (the Somali Compact), kaas oo markii ugu horeysey lagu ansixiyey magaalada Brussels bishii September sannadkii 2013. Barnaamijka Cahdiga Cusub ayaa waxaa ka abuurmey iskaashi ku saleysan isla xisaabtan, wadaagidda khatarta iyo mas’uuliyadaha ee dhinacyada Soomaaliya iyo beesha caalamka si loo hago horeyna loogu dhaqaajiyo ajendaha siyaasadda, amniga iyo horumarka Soomaaliya.
Waxaaa sannadkiii hore uu barnaamijkan ku tallaabsadey horumar la taaban karo, dhinacyada siyaasadda, amniga iyo agendaha horumarinta.
Madasha Heerka Sare ee Soomaaliya iyo waddamada ay iskaashiga leeyihiin ayaa la filayaa in lagu taageero go’aanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sannadkan 2016-ka,.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo saxiixay sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta Argagixisada
Ban Ki Moon oo gaaray magaalada Bujumbura ee dalka Burundi “Sawirro”